ညဘက်ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေမယ့် (၅) မိနစ်စာ ယောဂကျင့်စဉ် - For her Myanmar
တစ်ညလုံးအတွက် ၅ မိနစ်ကတော့ အတန်ကြီး တန်တာပါကွာ…
ညဘက်ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ဖို့ဆိုတာ လွယ်မယောင်နဲ့ခက် တိမ်မယောင်နဲ့ အင်မတန်နက်တဲ့ ကိစ္စပါပဲ။ တစ်နေ့လုံးသွားလာလှုပ်ရှားပြီး အတွေးပေါင်းစုံ၊ အဖြစ်အပျက်ပေါင်းစုံနဲ့လုံးပန်းရတဲ့အပြင် ဖြေရှင်းရခက်တဲ့ တချို့ပြဿနာလေးတွေ ရှိလာတဲ့အချိန်မှာဆို ကိုယ့်ရဲ့အိပ်ချိန်ကိုပါ သူကနှောင့်ယှက်တော့တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ တချို့တွေကကျတော့ ဘာမှတွေးစရာရှိမနေတာကို Overthinking (အတွေးနယ်ချဲ့လွန်ခြင်း) တောထဲမျောပြီး အိပ်မရပြုမရတွေဖြစ်ကြတာများတော့ နှင်းကပဲအလိုက်တသိနဲ့ ယောဂကျင့်စဉ်လေးတွေကို တင်ဆက်လိုက်ပါပြီ။
ခက်ခက်ခဲခဲပိုစ့်တွေဆိုရင် မလုပ်တတ်လို့ဘာလို့ညာလို့နဲ့ အကြောင်းပေါင်းစုံပြပြီး ဂျင်းပြန်ထည့်နေမှာစိုးလို့ တကယ့် အလွယ်တကာ့ အလွယ်ဆုံး ပိုစ့်လေးတွေကိုပဲ စုစည်းပြီးတော့ တင်ဆက်ပါမယ့်ရှင့်။ ဆက်ပြီးတော့ ဖတ်ကြည့်ကြပါဦးနော်။
ပထမဦးဆုံး ယောဂနေရာကိုမသွားခင် အခုလက်ထဲမှာ မလွှတ်တမ်း ကိုင်ထားတဲ့ဖုန်းကို ဒီဆောင်းပါးဖတ်ပြီးရင် ချပါ့မယ်လို့ ကတိပေး 😛 ကတိပေးနိုင်ပြီဆို ဆက်ဖတ်လို့ ရပါပြီရှင်..
(၁) ကြောင် (သို့) နွားပိုစ့် (CAT/COW)
နာမည်ကြည့်ပြီး လန့်ဖြန့်မသွားနဲ့ဦး။ ဒီအတိုင်း လေးဘက်ကုန်းပြီး အသက်ကိုရှူသွင်းတဲ့အချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ကို လေထဲမြောက်တက်သွားအောင် လက်ပြင်ကိုကုန်း၊ ခေါင်းကိုမော့ ခါးကိုဘုထွက်သလို ကွေးချလိုက်ပြီး နံပါတ်စဉ် ၁ ကနေ ၁၀ အထိရေ၊ ပြည့်သွားရင် လက်ပြင်ကိုပြန်ကော့ ခေါင်းကိုမော့ နံပါတ်စဉ် ပြန်ရေ။ ဒါပဲ။ အဲဒါမျိုးကို ၄ ကျော့လောက်ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေးလုပ်ပေးရင် ရပါပြီနော်..
(၂) ခြေရှေ့ဆန့်၊ ခန္ဓာကိုယ်ကွေးပို့စ် (Straight Legged Forward Fold)
အကြောလျှော့ဖူးတယ်ဟုတ်။ အာ့နဲ့အတူတူပဲရယ်။ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ပူးပြီးရှေ့ကိုဆန့်ထုတ် ပြီးရင်ခါးကို ဒူးခေါင်းနဲ့နဖူးထိတဲ့အထိ ကွေးချလိုက်ရုံပါပဲ။ အရမ်းကြီးထိစရာမလိုဘဲ ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ စိတ်ကိုလျှော့ပြီး အနားရသွားတယ်ဆိုရုံလောက်ပဲ ကွေးချနော်။ တစ်ခါကွေးရင် နံပါတ်စဉ် ၁ ကနေ ၁၀ အထိကို ၄ ကျော့လောက်လုပ်လိုက်ပါ။
(၃) ကလေးပုံသဏ္ဍာန်ပိုစ့် (Child Pose)
ကလေးလေးလို ခြေဖျားချ တင်ပါးကိုခြေဖျားပေါ်တင်ပြီးထိုင်၊ ပြီးရင်လက်နှစ်ဖက်ကို ဆန့်ပြီးခါးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကိုင်းချလိုက်။ ဒီပိုစ့်လေးကတော့ လုပ်ရတာအင်မတန်မှလွယ်ကူပြီး စိတ်ကိုတော်တော်အေးချမ်းစေတဲ့ ပိုစ့်လေးပါ။ (အိပ်ပျော်သွားမှာတောင် ကြောက်ရတယ်။) သူ့ကိုလည်း ခါးကိုင်းချတဲ့အချိန်မှာ နံပါတ်စဉ် ၁ ကနေ ၁၀ ရေပြီး ၄ ကျော့လောက် လုပ်ပေးနော်။
Related Article >>> နေ့တိုင်းနီးပါးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်လာအောင် ဘယ်လိုအရာတွေကို မွေးမြူရမလဲ?
(၄) တံတားပိုစ့် (Bridge Pose)
တံတားပုံသဏ္ဍာန် ခန္ဓာကိုယ်ကိုကော့ညွန့်ရတာမို့ တံတားပိုစ့်လို့ခေါ်ကြတာပါ။ အရင်ဆုံး ပက်လက်အနေအထား အိပ်လိုက်ပြီး ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ဒူးထောင်ထားလိုက်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ ဒီခြေထောက်အားကိုပဲသုံးပြီး ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ပင့်တင်လိုက်ပါ။ တစ်ခါပင့်ရင် နံပါတ်စဉ် ၁ ကနေ ၁၀ ရေပြီး ၄ ခါလောက် အထင်အချလေးလုပ်ပေးပါနော်။
ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ယောင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်း အတော်အသင့်လေး ငြိမ်းချမ်းသွားလိမ့်မယ်လို့ နှင်းက ယုံကြည်ပါတယ်။ (ဖုန်းကို ထပ်မပွတ်တော့ရင်ပေါ့လေ။) တစ်ခုသတိထားရမှာက ဒီယောဂကျင့်စဉ်ကို ပြီးချင်ဇောနဲ့ ခပ်မြန်မြန်ရေတွက်တာမျိုး လုံးဝမလုပ်ဘဲ ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန် အသက်ကိုရှူသွင်း၊ ရှူထုတ်ပြီး ကိုယ့်စိတ်ငြိမ်းချမ်းသွားအောင်ပဲ ဦးစားပေးပါလို့။
နောက်များမှ ထပ်ပြီးထိရောက်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ တင်ပေးဦးမယ်နော်။ အခုတော့ ၅ မိနစ်နဲ့ လုံးပန်းလိုက်ပါဦး 😛
References : groundedpanda, staradvertiser
တဈညလုံးအတှကျ ၅ မိနဈကတော့ အတနျကွီး တနျတာပါကှာ…
ညဘကျကောငျးကောငျးအိပျပြျောဖို့ဆိုတာ လှယျမယောငျနဲ့ခကျ တိမျမယောငျနဲ့ အငျမတနျနကျတဲ့ ကိစ်စပါပဲ။ တဈနလေုံ့းသှားလာလှုပျရှားပွီး အတှေးပေါငျးစုံ၊ အဖွဈအပကျြပေါငျးစုံနဲ့လုံးပနျးရတဲ့အပွငျ ဖွရှေငျးရခကျတဲ့ တခြို့ပွဿနာလေးတှေ ရှိလာတဲ့အခြိနျမှာဆို ကိုယျ့ရဲ့အိပျခြိနျကိုပါ သူကနှောငျ့ယှကျတော့တာပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ တခြို့တှကေကတြော့ ဘာမှတှေးစရာရှိမနတောကို Overthinking (အတှေးနယျခြဲ့လှနျခွငျး) တောထဲမြောပွီး အိပျမရပွုမရတှဖွေဈကွတာမြားတော့ နှငျးကပဲအလိုကျတသိနဲ့ ယောဂကငျြ့စဉျလေးတှကေို တငျဆကျလိုကျပါပွီ။
ခကျခကျခဲခဲပိုဈ့တှဆေိုရငျ မလုပျတတျလို့ဘာလို့ညာလို့နဲ့ အကွောငျးပေါငျးစုံပွပွီး ဂငျြးပွနျထညျ့နမှောစိုးလို့ တကယျ့ အလှယျတကာ့ အလှယျဆုံး ပိုဈ့လေးတှကေိုပဲ စုစညျးပွီးတော့ တငျဆကျပါမယျ့ရှငျ့။ ဆကျပွီးတော့ ဖတျကွညျ့ကွပါဦးနျော။
ပထမဦးဆုံး ယောဂနရောကိုမသှားခငျ အခုလကျထဲမှာ မလှတျတမျး ကိုငျထားတဲ့ဖုနျးကို ဒီဆောငျးပါးဖတျပွီးရငျ ခပြါ့မယျလို့ ကတိပေး 😛 ကတိပေးနိုငျပွီဆို ဆကျဖတျလို့ ရပါပွီရှငျ..
(၁) ကွောငျ (သို့) နှားပိုဈ့ (CAT/COW)
နာမညျကွညျ့ပွီး လနျ့ဖွနျ့မသှားနဲ့ဦး။ ဒီအတိုငျး လေးဘကျကုနျးပွီး အသကျကိုရှူသှငျးတဲ့အခြိနျမှာ ခန်ဓာကိုယျကို လထေဲမွောကျတကျသှားအောငျ လကျပွငျကိုကုနျး၊ ခေါငျးကိုမော့ ခါးကိုဘုထှကျသလို ကှေးခလြိုကျပွီး နံပါတျစဉျ ၁ ကနေ ၁၀ အထိရေ၊ ပွညျ့သှားရငျ လကျပွငျကိုပွနျကော့ ခေါငျးကိုမော့ နံပါတျစဉျ ပွနျရေ။ ဒါပဲ။ အဲဒါမြိုးကို ၄ ကြော့လောကျဖွညျးဖွညျးမှနျမှနျလေးလုပျပေးရငျ ရပါပွီနျော..
(၂) ခွရှေဆေ့နျ့၊ ခန်ဓာကိုယျကှေးပို့ဈ (Straight Legged Forward Fold)
အကွောလြှော့ဖူးတယျဟုတျ။ အာ့နဲ့အတူတူပဲရယျ။ ခွထေောကျနှဈခြောငျးကို ပူးပွီးရှကေို့ဆနျ့ထုတျ ပွီးရငျခါးကို ဒူးခေါငျးနဲ့နဖူးထိတဲ့အထိ ကှေးခလြိုကျရုံပါပဲ။ အရမျးကွီးထိစရာမလိုဘဲ ဖွညျးဖွညျးလေးနဲ့ စိတျကိုလြှော့ပွီး အနားရသှားတယျဆိုရုံလောကျပဲ ကှေးခနြျော။ တဈခါကှေးရငျ နံပါတျစဉျ ၁ ကနေ ၁၀ အထိကို ၄ ကြော့လောကျလုပျလိုကျပါ။
(၃) ကလေးပုံသဏ်ဍာနျပိုဈ့ (Child Pose)
ကလေးလေးလို ခွဖြေားခြ တငျပါးကိုခွဖြေားပျေါတငျပွီးထိုငျ၊ ပွီးရငျလကျနှဈဖကျကို ဆနျ့ပွီးခါးကိုဖွညျးဖွညျးခငျြးကိုငျးခလြိုကျ။ ဒီပိုဈ့လေးကတော့ လုပျရတာအငျမတနျမှလှယျကူပွီး စိတျကိုတျောတျောအေးခမျြးစတေဲ့ ပိုဈ့လေးပါ။ (အိပျပြျောသှားမှာတောငျ ကွောကျရတယျ။) သူ့ကိုလညျး ခါးကိုငျးခတြဲ့အခြိနျမှာ နံပါတျစဉျ ၁ ကနေ ၁၀ ရပွေီး ၄ ကြော့လောကျ လုပျပေးနျော။
Related Article >>> နတေို့ငျးနီးပါးလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတဲ့အကငျြ့ဖွဈလာအောငျ ဘယျလိုအရာတှကေို မှေးမွူရမလဲ?
(၄) တံတားပိုဈ့ (Bridge Pose)
တံတားပုံသဏ်ဍာနျ ခန်ဓာကိုယျကိုကော့ညှနျ့ရတာမို့ တံတားပိုဈ့လို့ချေါကွတာပါ။ အရငျဆုံး ပကျလကျအနအေထား အိပျလိုကျပွီး ခွထေောကျနှဈဖကျကို ဒူးထောငျထားလိုကျပါ။ ပွီးတာနဲ့ ဒီခွထေောကျအားကိုပဲသုံးပွီး ခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံးကို ပငျ့တငျလိုကျပါ။ တဈခါပငျ့ရငျ နံပါတျစဉျ ၁ ကနေ ၁၀ ရပွေီး ၄ ခါလောကျ အထငျအခလြေးလုပျပေးပါနျော။
ကဲ ဒီလောကျဆိုရငျတော့ ယောငျးရဲ့စိတျထဲမှာလညျး အတျောအသငျ့လေး ငွိမျးခမျြးသှားလိမျ့မယျလို့ နှငျးက ယုံကွညျပါတယျ။ (ဖုနျးကို ထပျမပှတျတော့ရငျပေါ့လေ။) တဈခုသတိထားရမှာက ဒီယောဂကငျြ့စဉျကို ပွီးခငျြဇောနဲ့ ခပျမွနျမွနျရတှေကျတာမြိုး လုံးဝမလုပျဘဲ ဖွညျးဖွညျးနဲ့မှနျမှနျ အသကျကိုရှူသှငျး၊ ရှူထုတျပွီး ကိုယျ့စိတျငွိမျးခမျြးသှားအောငျပဲ ဦးစားပေးပါလို့။
နောကျမြားမှ ထပျပွီးထိရောကျတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးလေးတှေ တငျပေးဦးမယျနျော။ အခုတော့ ၅ မိနဈနဲ့ လုံးပနျးလိုကျပါဦး 😛
Tags: 5, easy, minutes, position, quick, sleep, sound, Yoga
For Her Myanmar February 21, 2019
Wathun February 17, 2019